Fanivaivana: notorin’ny loholona Benessy ilay nanala baraka azy - ewa.mg
Fanivaivana: notorin’ny loholona Benessy ilay nanala baraka azy
News - Fanivaivana: notorin’ny loholona Benessy ilay nanala baraka azy
Tafapetraka eny anivon’ny
fampanoavana ambony, ny talata 13 oktobra teo ny fitoriana
napetraky ny loholona Benessy Harison Sébastien, loholon’ i
Madagasikara sady tale jeneralin’ny OMSI – Toamasina. Notoriny
amin’izany ny olona iray ahina ho nanao fanalana baraka sy
fanivaivana olom-panjakana mpikambana anivon’ny Andrimanjakana
ambony eto amin’ny firenena, tamin’ny alalan’ny valan-dresaka amina
fahitalavitra iray. “Tsy maintsy takina ny hamoahany ny porofo
amin’ny voalazany amin’ny maha dokotera manokana ny tenako sy ny
fianakaviako. Eo koa ny fanivaivana olom-panjakana amin’ny resaka
tsy anana porofo“, hoy ny loholona Benessy Harison.
Nanararaotra nanamafy ny vesatra mety hanenjehana an’ity
noampangaina ity koa ireo vondrom-pokonolona ao Andranomadio sy
Ambalamanasy I sy II, Belambo, Akanin’ny Nofy, nahazo
fandrahonana hogadraina sy hovonoina. Narahin’ny fampihorohoroana
noho ny ady tany nifanaovan’io olona io tamin’ny fokonolona izany
ka izao nametraka fitoriana eny anivon’ny fampanovana izao ireo
Etsy an-daniny, mbola tsy nanomboka
ny fanadihadiana ny zandary na efa voarain’ny borigady misahana ny
fikarohana sy ny ady heloka bevava, ny 13 oktobra, aza ny
antontan-tataratasy avy amin’ny fitsarana.
Sajo sy Synèse
L’article Fanivaivana: notorin’ny loholona Benessy ilay nanala baraka azy a été récupéré chez Newsmada.
Famonoana ankizivavy :: Mitohy ny fikarohana ny lehilahy iray any Mahajanga
Naparitaka, nanomboka afak’omaly, ny taratasy filazana fikarohana lehilahy iray, roa amby efapolo taona, voarohirohy ho namono an’i Adriana, ilay zazavavy, fito taona, hita faty rehefa avy nalevina an-tsokosoko, tany Ambohimandamina Mahajanga, tamin’ny alakamisy lasa teo. Mpiara-monina tamin’ ilay zaza niharam-boina ihany ity lehilahy karohina ity. Samy manao ny fitadiavana azy ny polisy sy ny zandary any Mahajanga. Io lehilahy io no fantatra fa nitondra an’i Adriana, mialoha ny fotoana tsy nahitan’ny reniny azy sy nikarohana azy teo antanàna. “Mety ho noho izy ireo efa mifankahalala no naneken’i Adriana nanaraka azy. Fantatra kosa fa tsy nisy olana teo amin’ io lehilahy io sy ny fianakaviana niharam-boina. Tsy mbola fantatra mazava, araka izany, ny antony niteraka hatramin’iny fanaperana ainy iny”, hoy ireo mpanao famotorana. L’article Famonoana ankizivavy :: Mitohy ny fikarohana ny lehilahy iray any Mahajanga est apparu en premier sur AoRaha.
Ivato Centre – Ambositra: taksiborosy Karandalina iray nivadika; iray maty, 52 naratra
Olona iray maty, 52 kosa naratra. Io ny vokatry ny fivadihan’ny kamiaobe Mercedes taksiborosy Karandalina iray tany anaty hantsana ao atsimon’Ivato Centre, RN 7 PK 258+50, ny talata alina hifoha alarobia tokony ho misasakalina. Araka ny fanazavan’ny zandary, nitondra mpandeha miisa 82 ity Karandalina ity (mifanaraka tsara amin’ny carte grise). Nihemotra tao anaty fiakarana sady fiolahana io fiarabe io ka namantana tany anaty hantsana amoron-dalana. Namonjy haingana teo amin’io toerana nitrangan’ny loza io ny zandary mpanao fisafoana mandeha amin’ny alina amin’iny RN 7 iny ka namonjy ireo olona niharam-boina sy nandefa azy ireo tany amin’ny hopitaly. Vokany, iray ny maty raha 52 naratra. Nandritra ny famotorana nataon’ny zandary ny mpamily, nilaza izy fa hoe nisy fiara Sprinter nifanena taminy nanambara fa misy jiolahy mpanakan-dalana ao aloha ao ka nahatapa-kevitra io mpamily io hihemotra teo amin’ilay fiakarambe sady fiolahana izany. Nohamafisin’ny zandary anefa fa tsy voamarina ny fisian’io fiara Sprinter io ary tsy hita io na teo aza ny fikarohana nataon’izy ireo satria nilaza tsaho. Nanao fanarahan-dia ireo tanjozotrana fiara ny zandary sady manao fisafoana mivezivezy mandroso sy miverina amin’io lalana io mandra-maraina ka tsy nisy olona na andian’olona nikasa hanafika izany teo amin’io faritra io na ny manodidina, raha ny fanazavana hatrany. Rehefa nozahana ny “vitesse”-n’ilay kamiaobe taksiborosy, tsy voamarina ho nihemotra fa nijanona teo amin’ny “vitesse première”. Jean Claude L’article Ivato Centre – Ambositra: taksiborosy Karandalina iray nivadika; iray maty, 52 naratra a été récupéré chez Newsmada.
Fotodrafitrasa manara-penitra Analanjirofo : ho vita mialoha ny faran’ny taona ny kianjan’i Sahavola
Anisan’ny nojeren’ny filoha, Rajoelina Andry, omaly ta­min’ny fitsidihany ny tao Fe­noarivo Atsinanana ny kianja manare-penitra ao Sahavola. Fantatra tamin’izany fa ho vita mialoha ny faran’ny taona ity fotodrafitrasa ity. Mizotra ta­haka izany koa ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasa ao amin’ny distrikan’i Brickaville ka vinavinaina ho vita afaka telo volana izany. Marihina fa mirefy 64 m ny sakany ary 94 m ny halavan’ny kianja. Mahatratra 505 m kosa ny halavan’ny “gradin”, manana haavo 77 m. Mahazaka mpijery 1 000 eo ho eo kosa ny “tribune centrale”. Ankoatra izay, ahitana “vestiaire” na toerana fisoloana akanjo ho an’ny mpilalao ny kianja. Nijery ifotony ny tao amin’ny distrikan’i Moramanga ihany koa ny filoha, izay mety ho vita afaka roa volana sy tapany. Marihina fa velirano nataon’ny filoha Rajoelina, nandritra ny fampielezan-kevitra, ny hametrahana kianja manara-penitra manerana ny faritra 22 eto Madagasikara. Anisan’ny laharam-pahamehana ho an’ny fitondram-panjakana ny hanome sehatra ny tanora amin’ny alalan’ny fanaovana fanatanjahantena, hananan’izy ireo saina mahiratra sy vatana salama, entina mampandroso ny firenena. Eo koa ny hananganana ekipa matanjaka hisian’ny hambompom-pirenena.Tompondaka L’article Fotodrafitrasa manara-penitra Analanjirofo : ho vita mialoha ny faran’ny taona ny kianjan’i Sahavola a été récupéré chez Newsmada.
Sady mamonjy aina no miteraka fahasalamana. Mpanome rà an-tsitrapo 50 ka hatramin’ny 60 no nandrasana teny amin’ny trano fitehirizan-drà eny amin’ny hopitaly HJRA Anosy nandritra ny hetsika nokarakarain’ny Groupe Masca Sabotsy Namehana sy ny kaominina Sabotsy Namehana niaraka tamin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, ny 23 oktobra 2020. “Andiany faharoa izy ity fa efa nisy tamin’ny 19 aogositra 2020. Ity ny hetsika faharoa noho fahatsapana amin’ny filàna rà aty amin’ny hopitaly”, hoy i Haingo Paradis, mpikarakara ny hetsika. Ilaina ny hetsika fanomezan-drà maimaim-poana tahaka izao. Araka ny fanazavan’ny tale lefitra ara-teknika eo anivon’ny trano fitehirizan-drà, Dr Rasamimanana Jean-Marie fa “farafahakeliny tokony hanana kitapon-drà 200 réserve isan’andro hitsinjovana ny filàn-drà mety ilaina eny anivon’ny hopitaly manodidina”. Nohamafisin’i Dr Rakotoarivony Manitra, talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka fa “ ny fisiana fanomezan-drà tahaka izao dia zava-dehibe satria misy olona tsy maintsy mila ilay aina avy amin’izao rà omentsika izao dia iny no ahazoany fahasalamana sy fahavelomana rehefa avy eo”. Ka ny fanentanana dia izao: “aleo manao toy izay hanaovana. Matetika ny olona rehefa miditra hopitaly vao mihazakazaka mieritreritra hoe tahaka izay aho nanome rà ihany”, hoy izy. Araka ny fanazavany hatrany fa mampitombo fahasalamana no mitondra fahahafam-po ny manome rà satria iny miteraka fahasalamana ho an’ny mpanome rà. “Ny fahatanoranao mody indray tahaka ny voromahery”. Tsiahivina fa afaka telovolana aorian’ny fanomezan-drà ny lehilahy no afaka manome indray ary afaka efa-bolana ny vehivavy. Mihoatra ny 60 kilao, manana tanjaka ara-dalàna, ny 60 taona no midina no fepetra takiana. Lynda A. Cet article FANOMEZAN-DRÀ ANTSITRAPO: Niditra tamin’ny andian’ny faharoa ny ekipan’i Haingo Paradis est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article FANOMEZAN-DRÀ ANTSITRAPO: Niditra tamin’ny andian’ny faharoa ny ekipan’i Haingo Paradis a été récupéré chez Délire Madagascar.